Wednesday January 13, 2021 - 12:09:50 in Wararka by Burco Office 2
Qowmiyadda Bidun ayaa dhalasho la'aan ku ahaa Kuwait tan iyo intii ay xornimada qaadatay 1961
Bidun waa eray Carabi ah oo la micno ah "la'aan" - dhalasho la'aan, taas oo la micno ah in qowmiyaddan aysan la macaamili karin bulshada inteeda kale; aqoonsi la'aan, waxay la micno tahay inay waddooyin adag u maraan waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo shaqo la'aanta.
Magaalada Sulaibiya oo ku taalla meel 17 kiilo mitir (11 meyl) dibadda ka ah magaalada Kuwait, waa duni ka go'doonsan xarumaha laga dukaameysto iyo dhismayaasha sare ee caasimadda ku yaalla.
" Waaqofka ugu naxariista badan ee dunidan ku nool, waa qof shakhsiyad dhab ah leh, mar walbana dhoolla caddeynaya," ayuu yiri Cumar.
Cumar ayaa dareemay xanuunkiisa: "Wax walba way ka soo xirmeen."
Arrinta Bidun ee dalka Kuwait waxay soo bilaabatay sanadkii 1961, markii qaar ka mid ah qoysaska oo degganaa xadka aysan dalban dhalashada dalkaas, kaddib markii Kuwait ay xornimadeeda ka qaadatay Britain. Dalalka kale ee gobolka Khaliijka ayaa sidoo kale waxaa ku nool dad aqoonsi la'aan ah.
Dalal kale oo Carabta Khaliijka ka tirsan sida Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta waxaa sidoo kale ku nool dad dhalasho la'aan ah, kuwaasoo ka soo jeeda qowmiyadaha reer miyiga ah ee aan dalban aqoonsiga.
Meelaha kale ee gobolka, dadka ayaa aqoonsi la'aan noqday kaddib markii dowladda ay ka qaadday dhalashadooda, sida Baxreyn oo tiro dadka deegaanka ah ka qaadday waraaqaha aqoonsigooda.
Arrintan ayaa mid cakiran ku noqotay dowladda Kuwait, oo qowmiyadda Biduns u aqoonsan "dad sharci la'aan ku jooga dalkaas".
Waxay sheegtay in keliya 34,000 oo ka tirsan in ka badan 100,000 oo aqoonsi la'aan ku ah dalkaas ay xaq u leeyihiin inay codsadaan dhalashada iyo inta hartayna ay yihiin dad dal kale u dhashay ama kuwo iyaga ka faracmay.
Inuu Hamad ka soo jeedo Bidun waxay ku kalliftay inuu waxbarashada ka tago isagoo da' yar
Wuxuu u muuqday mid go'aan ku gaaray in sidaasi ay ahayn noloshii uu doonayay. Walaalkiis ayaa sheegay in riyadiisa ay ahayd inuu ku biiro milatariga.
"Wuxuu arkay dunida, wuxuu arkay nolosha, wuu faraxsanaa. Wuxuu halkaas joogay muddo saddex toddobaad ah balse waxay la ahayd inuu saddex sano joogay. Shantii sano ee xigtay wuxuu ka hadli jiray safarki uu ku tegay Morocco."
Xildhibaan al-Khalifah ayaa dowladda ugu baaqay inay ka war hayso qowmiyadda Bidun